SOAMAHAMANINA: “Ny fanjakana no hamaritra ny fitohizan’ny fitrandrahana volamena”. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE SOAMAHAMANINA: “Ny fanjakana no hamaritra ny fitohizan’ny fitrandrahana volamena”.
SOAMAHAMANINA: “Ny fanjakana no hamaritra ny fitohizan’ny fitrandrahana volamena”.
By Nirinaoct 31, 2016, 12:50 0
Fifanarahana ao anatin’ny heritaona ary azo havaozina no ataon’ny ireo mampanofa tany amin’ny orinasa sinoa, JUIXING MINES saika hitrandraka volamena ao Soamahamanina. Manodidina ny 300.000 Ariary isam-bolana no raisin’izy ireo. Nisy tamin’ireo tompon-tany voakasiky ny toeram-pitrandrahana no nilaza fa mahazo tombony kokoa izy mihoatra ny fambolena ataony amin’ny fampanofana ny tany. Etsy ankilany, misy ireo tsy mankasitraka ity fitrandrahana ity. Ao ireo miteny fa tsy misitraka akory ny tombontsoa amin’ity tetikasa ity izy ireo ka nahatonga ny fitokonana. Nambaran’ny tomponandraikitry ny seraseran’ny orinasa sinoa, Stella ANDIAMAMONJY, anefa fa foto-drafitra asa maro no mifanindran-dalana amin’ny fitrandrahana. Nampanantena ireo sinoa fa ho hamboarina ny lalana ao an-tanana, hanampy amin’ny fananganana sekoly sy toeram-pitsaboana… izy ireo. Atao vain-dohan-draharaha ireo mponina ao Soamahamanina amin’ny fandraisana mpiasa. Anisany nanamafy izay ihany koa ny lehiben’ny fokontany iray, Laurent RAKOTONIRINA ary nohamafisiny mihitsy fa efa nampitaina tamin’ny mponina izany rehetra izany.
Vokatry ny fisavorovoroana, nody aloha ireo sinoa ary efa saika nampiakarina eto Antananarivo avokoa ireo fitaovana vaventy saika nampiasaina. Araka ny fanazavan’ny Tale ara-teknika, Dany RASOLOMANANA dia ara-dalana ny taratasy fahazoan-dalana ampiasain’ny orinasa. 22 taona amin’ny 40 taona no afaka mitrandraka ity farany. Tany manam-tompo mirefy 10 ha izao no efa vita fifanarahana.
“Ny fanjakana ihany no mamaritra na afaka hiverina hanohy na tsia ny fitrandrahana natomboka ireo teratany sinoa”. Hatreto mantsy dia mbola manan-kery io fahazoan-dalana io.
Previous PostROVAN’ANTONGONA: “Olona te hahazo fahefana no nangalatra ireo vakoka manan-danja”. Next PostPLASTISHARE: Tanora zazavavy efatra nahavita namorona fitaovana amin’ny tavoahangy.